Ukuthakazelisa kwezilwane ezinwabuzelayo - kungani sithanda ama-dinosaurs okuqala kakhulu
Ukunakekelwa kanye nezindleko zezilwane ezinwabuzelayo njengezilwane
Kubukeka sengathi kuwumkhuba ophelele futhi inja yeklasi noma ikati ephelele ngokuphelele. Manje emakhaya aseJalimane izilwane ezinwabuzelayo eziningi futhi izingane zethu manje zifuna i-turtle, i-gecko noma i-tarantula.
Lokho esikusize nje ukugubha amakhanda ethu empeleni kuyindlela yokukhetha futhi okunye okunye okuyisilwane sasendulo. Yebo, emva kwakho konke, unesilwane esikhethekile kakhulu endlini yakho. Kodwa ingabe izilwane ezifuywayo zifanele ngempela umkhaya nezingane noma nhlobo?
Ingabe izilwane ezinwabuzelayo zifanelekayo njengezilwane ezifuywayo ezinganeni?
Kuyamangalisa, kodwa ama-turtles noma izinhlobo ezihlukahlukene zezimbongolo zisishukumisa, mhlawumbe ngoba zisikhumbuza ngezikhathi ezilibalekile.
Ngaphezu kwalokho, zihluke ngokuphelele emvelweni wazo, ziziphatha ngokuphambene kakhulu nezilwane ezifuywayo eziziwa futhi zihlaba umxhwele ekubukeni.
Yebo, izilwane ezihuquzelayo yizilwane ezimangalisayo. Kodwa kufanelekile njengesilwane? Futhi izingane?
Ingabe kufanele sithenge i-reptile?
Ngaphambi kokuba ucabange ngokuthenga i-reptile, njenge-chameleon noma i-gecko, kufanele uqaphele izinto ezithile.
Okokuqala, i-reptile ayifuni emisebenzini futhi iyasilimaza ngokweqile. Uma ungeke ujabulele ukubukeka kwezilwane ezinwabuzelayo unomphela, ngeke ujabule nabo ngokuhamba kwesikhathi. Izimpethu zihamba kuphela uma kukhona okudliwayo. Enyangeni yokuzila ukudla okuhle kakhulu.
Ezinye izinhlobo ze-lizard azikwazi ngisho nokuhambisa imitha eyodwa ngosuku futhi uma kunjalo, kuphela uma singaboni. Izingane, ikakhulukazi, kufanele zihanjiswe ngokushesha ne-gecko ekhukhulayo.
Nge-reptile awukwazi ukukhipha, ukuhamba noma ukuwuthwala. Futhi, izilwane ezihuquzelayo ngeke zikhange kubantu. Ngeke udinga isikhathi namandla ukuze ufundise le nkohliso, ngeke lifunde.
Isiqephu sekhasi lokubala - I-colorful ikhasi lekhasi
Futhi, i-reptile ayinaso isidingo sokusondelana noma ingathanda ukufunwa nguwe. Ayifuni ukunakwa kwakho. Ngokuphambene nalokho, siphume ngaphandle kwe-terrarium, izogxila futhi angeke ifunde ukuthi awukwenzi lutho kulokho.
Iziqubuzane ziyabiza, hhayi nje esigabeni sokuthenga. Izindleko zamanje zamagesi zanoma yiziphi izibani zokushisa kufanele zibalwe. Ngaphezu kwalokho, izindawo zokuhlala ezinhle zibiza ama-euro angamakhulu, izesekeli futhi ukudla kungashaya nyangazonke nge-50 Euro.
Uma ungenandaba ngempela nezilwane ezihuquzelayo futhi ngezikhathi ezithile uthola ezithakazelisayo, akufanele uthenge i-reptile. Ngaphezu kwalokho, izilwane eziphefumulayo zazo zonke izinhlobo azikho ezandleni zezingane. Nakuba i-turtle ngeke ikhononde lapho u-Hugo omncane emthatha egumbini lokuphumula engena ensimini, angeke asithande.
Utshwala njengesifo se-aphrodisiac - erotic
Ukugcinwa okufanele koogwaja - izilwane ezifuywayo